uSodolophu womasipala ombaxa iBuffalo City, Cllr Xola Pakathi ugqithise umyalezo kubahlali malunga namanzi. – Ntu News
uSodolophu womasipala ombaxa iBuffalo City, Cllr Xola Pakathi ugqithise umyalezo kubahlali malunga namanzi.
January 27, 2022 January 27, 2022 Jasmin Rose	0 Comments
Ngu Sesona Mqheliswa & Iviwe Makhasi
Umasipala waseBuffalo City uhlaziya abahlali malunga nomngeni womgangatho wamanzi nokuthembeka okuchaphazela iindawo ezithile zesixeko, oku kulandela izantyala-ntyala zeemvula nezaqwithi ezithe zahlasela esi sixeko ekuqaleni kwenyanga yomqungu ukanti ngoku lemeko ibhengezwe njenge ntlekele.
“Intshabalalo eye yafunyanwa luninzi lwabantu bethu inkulu kakhulu. Siyazi ngoku ukuba isaqhwithi sibangele ukufa nentshabalalo ingakumbi eMdantsane naseDuncan Village kodwa singaqinisekisa ukuba zonke iindawo zesixeko sethu zachatshazelwa kakubi sesi saqhwithi”, utshilo Cllr Xola Pakati.
Iziseko ezingundoqo zesixeko nazo zezona zachaphazeleka kakhulu, ngakumbi iindlela, izixhobo zombane nezakhiwo. Izikhukhula nazo zibe nefuthe elibi kwiziseko ezingundoqo zamanzi kunye nomgangatho wamanzi abahlali beendawo ezithile zeMetro abakhala ngawo sesinye sezalathi zobungakanani bezikhukhula.
uCllr uqhubeke wathi “sifuna ukuqinisekisa abahlali bomasipala ombaxa ukuba sisebenza imini nobusuku ukuqinisekisa ukuba imeko iyaphucuka”.
Amanzi akrwada asuka kwiDama loMthonjeni ukuya kwiMisebenzi yokuCocwa kwaManzi eMzonyana aye achatshazelwa kakubi zizikhukula eziye zachaphazela kakubi indlela umzi-mveliso okwazi ngayo ukunyanga nokukhulula amanzi kwisixokelelwano sokuhambisa. Ngenxa yokuba le nkqubo ithatha ixesha elide ukuchacha ngokupheleleyo ngenxa yemfuno ephezulu yamanzi, kuye kwafuneka ukuba isixeko siyithathele ingqalelo le meko ngokupheleleyo.
uCllr wongeze ngelithi “siphumeza inani lezicwangciso zokunciphisa ukubuyisela iNkqubo yokuBonelela ngaManzi eMzonyana kwaye phakathi kwezi zezi zilandelayo: sibonelela ngeetanki zamanzi ukunceda iindawo ezichaphazelekayo, size nengcali yangaphandle ukuba icebise ngezisombululo ukuze kuzinziswe Inkqubo kwaye siya kucutha unikezelo lwamanzi phakathi kwe-22h00 kunye ne-04h00 rhoqo ngorhatya ukuze sakhe indawo yokugcina iindawo eziphakamileyo kwaye oku kuya kuphunyezwa de inkqubo yayo ibuyele ngokwaneleyo nangona kunjalo oku akuzi kuchaphazela yonke imimandla yemetro”.
uCllr ukwadlulise amazwi okuxolisa kubo bonke abahlali bomasipala ombaxa ngale meko, ukwathe njengeenkokheli zezopolitiko zeli ziko bazakuwubeka esweni umceli mngeni wamanzi mihla le kwaye baza kunika uhlaziyo rhoqo kubahlali beendawo ezichaphazelekayo kude kube inkqubo yokuhanjiswa kwamanzi ikumgangatho ofunekayo.
← EXUCUTIVE MAYOR OF BUFFALO CITY SENT MESSAGE TO RESIDENTS REGARDING WATER
UMZIMVUBU LOCAL MUNICIPALITY PARTNERED WITH SASSA HANDED UNIFORMS TO VULNERABLE LEARNERS →
January 6, 2022 January 15, 2022 Jasmin Rose	0
Pioneer Foods recalls apple juice products
October 8, 2021 October 8, 2021 Jasmin Rose	0